Maraykanka oo ka baxay heshiiskii Paris ee Isbeddelka Cimilada – Kasmo Newspaper
Maraykanka oo ka baxay heshiiskii Paris ee Isbeddelka Cimilada
Updated - June 2, 2017 4:20 pm GMT
London (Kasmo), Donald Trump uxuu ka dhabeeyay mid ka mid ah ballantiisii doorashada, isaga oo ku dhawaaqay in Maraykanku dib uga guranayo heshiiskii Paris ee isbeddelka Cimilada, kaas oo sannadkii 2015kii dalal gaaraya 195 ku gaareen sidii loo yarayn lahaa heerka wasakhaynta hawada, Maraykankuna u u saxiixay Madaxweynihii hore Barack Obama.
Trump ayaa heshiiskaas ku tilmaamay mid ka soo horjeeda danaha dhaqaale ee dalkiisa, kana hor imaanaya mabaadii’da maamulkiisa ee “America First”, isla markaasna u faa’ideynaya dalal uu ka mid yahay Shiinaha.
In kasta oo diidmada Trump ku fillayn burburinta heshiis Qarammada Midoobay gar-wadeen ka ahaayeen, waxaan dhanka kale ku raacsanayn bulshada ganacsiga “Wall Street” iyo “Silicon Valley”, iyo qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee saliidda, sida Exxon Mobil, Chevron iyo Bp.
Dalka Shiina oo markii horeba uu Madaxweyne Obama ku qanciyay ka mid noqoshada heshiiska ayaa xaqiijiyay in uu kala sii shaqayn doono Yurub iyo dunida inteeda kale, sidii loo gaari lahaa hadafkii yaraynta wasahkda hawada.
Laakiin Midowga Yurub ayuu ka soo baxayaa dhawaqa ugu kulul, Madaxweynaha Guddiga Midowga Yurub, Jean Claude-Juncker, ayaa wax an fiicnayn ku tilmaamay in Maraykanku ka baxo saaxadda Adduunka, wuxuuna ka digay in halka ay banneeyeen la buuxin doono.
Madaxweynaha Fransa, Emmanuel Macron, ayaa ku eedeeyay Maraykanka in ay dhabarka u jeediyeen Dunida, wuxuuna cilmi-baarayaasha Maraykanka ku casuumay in ay u soo guuraan Fransa, si ay ugala shaqeeyaan arrimaha isbeddelka Cimilada.